Nofinofy nofinofy hoe "Whisky" - Mili Mili
Home > Nofinofy nofy "Whisky"
Nofinofy nofy "Whisky"
Fanam-boninkazo nofinofy «Moisili» tany am-boalohany, dia firavaka miavaka sy vita tanana izay hanome toetra tsy manam-paharoa amin'ny atitany iray. Ny takelaka volo manga dia ampiarahina amin'ny felaka matevina amin'ny loko mavokely, manga ary volo. Ireo volom-borona, lakolosy ary pompom mavokely dia manampy mahavariana. Io mpametaka io dia tonga lafatra ho an'ny interiors malemy, pastel, girlish.
Fitaovana: kitay, landihazo, lakolosy volafotsy, vakana maro loko, volom-borona maro loko, peratra hazo